Somali - Daawooyinka Aanan Insulin ahayn (Kiniinno iyo Waxyaabo jirka lagu mudo)
Daawooyinka Sulphonylurea waxay kiciyaan beeryarahaaga (xubinta caloosha ku taalla ee soo saarta hormoonka insulin) si uu insulin dheeraad ah u soo saaro, taasoo markaa kaa yarayn doonta gulukooska dhiigga. Daawooyinka Sulphonylurea waxay keeni karaan dheefshiid yara xun, madax xanuun, firiirica haragga iyo korodhka culayska. Wajiga ayay guduudi karaan haddii khamri la cabbo. Waxay aad u yarayn karaan gulukooska dhiigga taasoo kordhisa halista yaraanshaha sonkorta dhiigga, fiiri buugyaraha yaraanshaha sonkorta dhiigga. Add link to updated hypo leaflet
Canagliflozin iyo Metformin (Vokanamet) 50mg/850mg 50mg/1000mg
Empagliflozin iyo metformin (Synjardy) 5mg/500mg 5mg/1000mg
Exenatide Extended Release (Bydureon) 2mg toddobaadkiiba mar
mudis labo jeer maalintii ka hor quraacda iyo cashada
Liraglutide (Victoza) 0.6mg, 1.2mg
maalintiiba mar mudis qalin
mudis maalintiiba mar
Kiniinnada ha iska joojin. Fiiri buugyaraha isku dabbaridda jirrada.